समाचार - एक Aftermarket स्टेरियो मा स्तरवृद्धि को लाभ
सेप्टेम्बर २०२१- तपाईं आफ्नो सुधार किन सोच्न सक्नुहुन्छ Subaru STI एन्ड्रोइड इकाईतपाईं आफ्नो मनपर्ने संगीत सुन्न काम गर्न ड्राइभ गर्दा आवश्यक छ। आखिर, निर्माता टाउको इकाई संगीत बजाउन पूर्ण रूपमा सक्षम छ। किन काम गरिरहेको कुरा संग गडबड? तथापि, अफ्टरमार्केट रेडियोमा स्तरवृद्धि गर्ने धेरै फाइदाहरू छन् जुन तपाईंलाई थाहा नहुन सक्छ। अफ्टरमार्केट रेडियो स्थापना गर्दा सबैका लागि उत्तम विकल्प नहुन सक्छ, त्यहाँ धेरै फाइदाहरू छन् जसले तपाईंको यात्रालाई सुधार गर्न सक्छ।.
Aftermarket स्टेरियो को लाभ
तपाईं ध्वनि गुणस्तरमा थप नियन्त्रण चाहनुहुन्छ। धेरै आफ्टरमार्केट स्टेरियोहरूले कार्यक्षमताको सर्तमा OEM उपकरणलाई पछाडि पार्नेछ। पक्का, तपाइँको मूल हेड एकाईमा निश्चित रूपमा बास, मध्य-दायरा, र ट्रेबल नियन्त्रणहरू छन्, तर यी तपाइँसँग हुनु पर्ने कार्यहरूको पूर्ण नग्न न्यूनतम कार्यहरू हुन्। एक समीकरण वा एड-अन उपकरणको लागि समर्थन पनि एक aftermarket स्टेरियो मा पाउन सकिन्छ। तपाईले फ्रिक्वेन्सी प्रतिक्रियामा सुधारिएको नियन्त्रण प्राप्त गर्नुहुन्छ जब तपाईले उचित कम्पोनेन्टहरू संयोजन गर्नुहुन्छ, तपाईलाई चाहानु भएको ध्वनि दिनुहुन्छ।
तपाईंको ब्रान्ड-नयाँ कारमा अत्याधुनिक प्रविधि हुन सक्छ, तर के तपाईं पुरानो गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ भने? के तपाइँ ब्लुटुथ र कनेक्टिभिटीका अन्य रूपहरू बिना सन्तुष्ट हुने आशा गर्नुहुन्छ? पक्कै होइन! तपाईंसँग नयाँ मोडेलहरूमा फेला परेका सबै सुविधाहरू हुन सक्छ नयाँ कार भुक्तानीहरूको लागि साइन अप नगरिकन पछिको स्टेरियो अपग्रेडहरूका लागि।सुबारु WRX एन्ड्रोइड इकाई। तपाइँ तपाइँको मिल्दो स्मार्टफोनमा जडान गर्न सक्षम हुनुहुनेछ चाहे तपाइँ एकल DIN वा डबल DIN रिसीभर छनौट गर्नुहुन्छ। यो सुविधाले तपाईंलाई ड्राइभिङ गर्दा मनपर्ने संगीत सुन्न अनुमति दिन्छ। धेरै संस्करणहरूले तपाईंलाई तार वा ब्लुटुथ जडान मार्फत संगीत सुन्न पनि दिन्छ।
धेरै वाहन मूल्याङ्कन प्लेटफर्महरूले गाडीको सुविधाहरूको बारेमा सोध्ने भएकोले, इलेक्ट्रोनिक्स अपग्रेड गर्दै र तपाईंको सुबारुको WRX एन्ड्रोइड इकाईगाडीको पुनर्विक्रय मूल्य बढाउन सक्छ। यसले निश्चित रूपमा गाडीको आकर्षणमा थप्छ, यदि अरू केहि छैन। जब तपाईं कार देखाउँदै हुनुहुन्छ, यो बिक्री बिन्दु हो। तपाईले यो पनि जोड दिन सक्नुहुन्छ कि टेस्ट ड्राइभको समयमा आवाज कत्तिको उत्कृष्ट छ ताकि सम्भावित खरिदकर्ताले यसलाई सुन्न सक्छ।
तपाईं विभिन्न तरिकामा आफ्नो aftermarket रेडियो निजीकृत गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ आज नयाँ हेड एकाइको साथ सुरु गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँ पछि सजिलै अपग्रेड गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो बजेट विस्तारमा सधैं लचिलो हुनुहोस्। यसले तपाइँलाई चलिरहेको परियोजनाहरूको सूची पनि प्रदान गर्दछ जुन तपाइँले बिस्तारै तपाइँको गाडीको भित्री परिमार्जन गर्दा काम गर्न सक्नुहुन्छ।
आफ्टरमार्केट अडियोमा अपग्रेड गर्ने सबै फाइदाहरूको समीक्षा गरेपछि, तपाईं किन आफ्नो मौलिक उपकरणहरू सुरक्षित गर्न चाहनुहुन्छ? यसलाई थप सुविधाहरू प्रदान गर्ने समय आएको छSubaru STI एन्ड्रोइड इकाई। छोटो बजेटमा पनि, सुधारिएको स्टेरियोले तपाईंलाई अतिरिक्त जडान र रमाइलो प्रदान गर्न सक्छ।